Tababare Arsene Wenger Oo War Cusub Kasoo Saaray Mustaqbalkiisa Arsenal, Miyuu Sii Joogayaa Odaygu Mise..? – Kooxda.com
Home 2017 February Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Tababare Arsene Wenger Oo War Cusub Kasoo Saaray Mustaqbalkiisa Arsenal, Miyuu Sii Joogayaa Odaygu Mise..?
Tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa lagu waday inuu dhamaadka xilli ciyaareedkan isaga tago shaqada tababarenimo ee kooxda Arsenal balse taasi ayaa u muuqata mid aan suurto gal aheyn.
Tababare Arsene Wenger oo saxaafada la hadlaya ayaa sheegay hadalo u muuqda inuu xillo ciyaareedka danbe sii maamuli doono Arsenal ayna macquul tahay bilaha soo socda inuu qandaraas cusub saxiixo.
Wenger oo saxaafada la hadlaya ayaa yiri, “Wax kastaba ha dhacaane xilli ciyaareedka danbe waan maamuli doonaa, ama Arsenal ama koox kale ha ahaato. Habeenkii Bayer oo kale waan necbahay guuldarada sidaan oo kale ah, waxaana rabaa inaan kooxdan wax fiican u qabto. Waxaan dareemayaa mausuliyad weyn”
Masuulka oo hadalka wali sii wata ayaa yiri, “Inta aad 20 sano halkan oo kale ka shaqeyso kadibna ma bixi kartid kadib kulan noocaas oo kale ah”
Arsene Wenger ayaa intaasi kadibna shaaciyay in mustaqbalkiisa uu bilaha March iyo April kala ogaan doono wuxuuna isaga oo hadalka sii wata yiri, “Aan dhaho March ama April sababtoo ah ma ogsooni. Ma rabo inaan mustaqbalkeyga ka faalloodo, Mustaqbalkeyga muhiim ma ahan balse waxaa muhiim ah kooxda Arsenal Football Club. Waxaa muhiim ah waxay tahay go’aanka saxda ah ee kooxdu sameyn doonto”
Ugu danbeyn Arsene ayaa hadalkiisa kusoo af meeray, “Halkaan 20 uma joogin inaanan kooxda dan ka laheyn. Waxaan haystay fursado aan meelo kale ku aad, balse waxaan daneynayay kooxda iyo mustaqbalkeeda. Kooxdu waxay u baahantahay inay gacan Sugan ah ku jirto”